Nyocha IVA | Importgbọ M Mbubata
Ndị Mbubata hicgbọala n'widewa Niile Bubata ndị ọkachamara Nyocha IVA zuru ezu Cargbọ ala gị ga-ekwenye kpamkpam na UK Afọ 30 nke Ahụmịhe Mara, Ọkachamara na Oru.
Anyị jikwaa anyị onsite IVA ule oge
Enweghị oge nchere gọọmentị - anyị nwere nkeonwe ma nwee ike ibudata ụgbọ gị maka ngwa ngwa IVA karịa ebe ọ bụla ọzọ.
Dika anyi nwere ulo anyi na ijikọ ya na DVSA enwere ọtụtụ elele nke akpọtụrụla. Mana dịka ndị ọkachamara na-eduga na United Kingdom maka ịbubata ụgbọ ala enyerela anyị ikike ịnwale ụgbọ ala.
Nke a pụtara na ụgbọ gị anaghị ahapụ ịga njem gọọmentị maka ule ahụ ga-eme, anyị dịkwa mpako na anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị ọrụ a.
Site na oghere ndị edeturu n'izu ọ bụla, ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-agbanwe ngwa ngwa ma gbanwee mgbanwe ọ bụla kwesịrị ibute ule IVA gị. Enweghị ụlọ ọrụ ọzọ na United Kingdom nke nwere ike ịnye ọrụ dị ka ya.
Gịnị bụ Nkwado Vegbọala Otu Onye?
NA-EME ELỌ PLLỌ gị na-agbaso ụzọ UK
IVA na-anọchite anya Nkwado hicgbọala Onwe Onye ma metụtara Typedị Nkwado nke ugbo ala na UK. Rodị Nkwado bụ usoro nke na-eme ka ụgbọ ala, usoro ha na ihe ndị mejupụtara ya, na-agbaso ụkpụrụ gburugburu ebe obibi na nchekwa kwesịrị ekwesị maka iji ya na UK na Europe.
Ka e wee debanye aha gị na UK, ọ ga-egosiputa na o nwere ụdị Appdị Nkwado. N'ihe banyere ugbo ala aka oru aka ohuru nke enyere gi na ndi na ere ahia gi ka ndi n’emeputa ya gha enweta nkwado ha dika akwukwo.
Maka ndị ọzọ anyị nwere ụgbọ ala anyị na-ebubata site na mpụga EU ma ọ bụ ụgbọ ala aka ekpe, anyị nwere ike iji ule IVA nweta ụdị nnabata anyị kwesịrị ịdebanye aha ụgbọ ala anyị.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere n'oge ule IVA?
Nnyocha ahụ n'onwe ya na ihe a nwalere n'ụgbọ ahụ
Na United Kingdom, ugbo ala nile choro MOT iji gosi na ugboala di 'uzo kwesiri' ma di nchebe. Mana ule IVA na-elele ụgbọala ahụ site n'echiche dị iche. Ebumnuche nke ụgbọ ala ahụ bụ ịnyịnya ibu iji hụ na ọ na-ezute ụkpụrụ dị na EU.
Ọtụtụ oge ụgbọ ga-achọ nyocha IVA ma ọ bụrụ na ebuteghị ya n'ime EU ma ọ bụghị okenye karịa afọ iri nanị n'ihi na EU CoC bụ ihe akaebe na ụgbọala ahụ na-emezigharị, ergo an IVA test may not Achọrọ ma ọ gwụla ma EU arụpụtara ụgbọ ala COC enweghị ike ịnweta.
Kedu ndị bụ DVSA?
Tù na-achị isi maka ịlele nnabata ụgbọ
A na-anwale ule IVA site n'aka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ụgbọ ala ụgbọ ala na ọdụ nyocha DVSA ma ọ bụ ebe a kwadoro ụlọ DVSA dịka nke anyị. Ndị ọrụ DVSA na-eleta saịtị anyị na izu niile ma na-eme nyocha na ụgbọ ala ndị ahịa anyị na-esonyere otu n'ime ndị ọrụ nyocha IVA anyị. Inwe onye ọkachamara nwere nkà na-egosi ụgbọ gị maka ule bụ nnukwu uru karịa igosipụta ụgbọala ahụ maka ịnwale onwe gị n'ihi na a na-achọkarị ka ị gosipụta akụkụ ụfọdụ nke ụgbọ ahụ na onye nyocha nke nwere ike ịbụ n'azụ akụkụ mkpụbelata ma ọ bụ na-esiri ike iru mpaghara nke injin ahụ n'ọnụ mmiri. Ozugbo afọ juru ha, ha nyefee asambodo IVA anyị ji edebanye ụgbọ gị na DVLA.
Vehiclegbọ gị ga-achọ mgbe ụfọdụ mgbanwe iji nweta ụdị nkwado UK na ndị ọkachamara anyị nwere ahụmịhe iji kwadebe ụgbọ gị na ọkọlọtọ IVA ka ọ bụrụ na elele ya, anyị nwere ntụkwasị obi na ọ ga-agabiga oge ọ bụla.
Anyị ga-ejikwa akwụkwọ niile metụtara ngwa gị yana kọntaktị anyị na VOSA ka ị ghara igbu oge ọ bụla ịdebanye akwụkwọ na azụ ruo mgbe ọ dị mma.